N'ogbe PITA Soda Mkpọ Manufacturer na Supplier | Copak
PET soda mkpọ, nwere ike ịbụ aha dị ka ite PET, PET pop-top ite na na. PET PON bụ ngwakọta pụrụ iche nke PITA PET na Mfe imeghe mkpuchi mkpuchi, ejiri ya mee ihe PET ma dị mma maka ngwugwu maka ihe ọ drinksụ drinksụ dịka mmanya, mkpụrụ osisi, smoothies, milks, teal, kọfị nwere ice, milkshakes na wdg. Featuresfọdụ atụmatụ nke COPAK'sPET soda mkpọ dị ka n'okpuru,
PET soda mkpọ, nwere ike ịbụ aha dị ka ite PET, PET pop-top ite na na. PITA Pụrụ bụ ngwakọta pụrụ iche nke PITA PET na Mfe imeghe mkpuchi mkpuchi.Ejiri ihe PET mee ha ma dị mma maka nchịkọta maka ihe ọ drinksụ drinksụ dịka mmanya, mkpụrụ osisi, smoothies, milks, teal, kọfị nwere ice, milkshakes na ihe ndị ọzọ. Fọdụ atụmatụ nke COPAK’s PET soda mkpọ dị ka n'okpuru
- Ihe: Elu PET dị elu, enwere ike imegharị 100%.
Nchekwa nri nri: Site na ngwongwo ihe na mmepụta na mbupu. Usoro niile agwụla na ọkwa nri.
Ogologo oge na-adịgide adịgide ma na-eguzogide ọgwụ: PET soda Mkpọ zuru oke maka iwepụ nri gị. Ezubere ha maka ijide aka ma kaa akara. Adịghị mkpa ka nchegbu banyere leakage ma ọ bụ cracks.
- Cap: Jiri ihe Aluminom, zip-top ike. Mfe na-emeghe ma dị ọcha.
Ezi echiche, ndị ahịa nwere ike ịhụ ọdịnaya ozugbo, na-eweta ọkwa na uru ngwaahịa gị
Ezigbo Ihe mgbochi si Oxygen, Carbon dioxide Moisture.
Hailọ ọrụ ụlọ ọrụ Shanghai COPAK bụ ọkachamara na-emepụta ọkachamara maka ngwugwu PET nke ụdị dị iche iche. PET iko, PET karama na PET soda Mkpọ bụ isi ngwaahịa anyị.PET soda mkpọ gbanwee n'ụdị, mpịakọta, nha na mbipụta ya. Can nwere ike ịgwa gị chọrọ nkọwa, gị chọrọ PET nchịkọta ga-adị n'aka gị.
Olu a sitere na 6oz ruo 24oz. 12OZPET soda mkpọ na 16 OZ PET soda ndị kacha ewu ewu.
Ahaziri: 4C mpempe akwụkwọ mmado ma ọ bụ plastic ịda mbà film wrapping ma ọ bụ UV-ihuenyo ebi akwụkwọ na karama na-akwado maka logo obibi.
Ihe nkpuchi na karama na-akàrà site na igwe akara. Ihe mkpuchi dị mfe imeghe site na ịdọrọ mgbanaka pop-top.
Ọkara akpaka ma ọ bụ 100% akpaka soda nwere ike akara igwe na-ọnọ. Anyị nwere ezigbo mmekọrịta ụlọ ọrụ igwe na-arụ ọrụ akara ma nwee ike ị nweta ọnụ ahịa asọmpi maka gị. Can nwere ike ibute igwe akacha akara naPET soda mkpọ ọnụ n'otu akpa.
Nke gara aga: PET pop-elu nwere ike
Osote: Plastic soda nwere ike
Clear Plastic karama
Eco Enyi na Enyi na karama plastic